စကားပြောမိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - ဗီဒီယိုချက်တင် - အချစ်အွန်လိုင်း!
၏အားသာချက်ဒီဗီဒီယိုချက်တင်အားဖြင့်ခေါ်ကြောင်းအွန်လိုင်းချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ ၁၈ မပါဘဲ။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင် အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းဖွင့်ဖို့ချင်သူအမျိုးသမီးနှင့်တွေ့ဆုံရန်တစ်ဦးကောင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သို့မဟုတ်အသိမိတ်ဆွေအားဖြင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြား။ ဒါကြောင့်ဖွင့်ဖို့သဘောတူထားချက်တင်ကစားတဲ့အချိန်မှာ။ ဟုတ်ပါတယ်၊အများကြီးရှိပါတယ်အမျိုးသမီးနှင့်မိန်းကလေးများ။ ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကသူတို့အားလုံးပါဝင်။ သင်ခွင့်ပြုနေကြတယ်အဖြစ်ဒီဗီဒီယိုမှာပင်သင့်အောက်၌ရောက်နေတယ်ဆိုရင် ၁၈။ ဒါကြောင့်တက်အလျင်အမြန်ဖို့ချက်တင်နှင့်ချိန်းတွေ့ကစားတဲ့စကားပြောမိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအလွန်ခက်ခဲသည်အင်တာနက်ပေါ်ရှိတွေ့ဆုံရန်ဖို့ပြုလုပ်ချိန်းတွေ့ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်၊ဒါပေမယ့်ဒီချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးအရာအားလုံးရိုးရှင်းပါသည်။ ငါ့ကိုဆုကိုတောင်းအဘယ်ကြောင့်။ အကဲျရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်၊ယောက်ျားအများကြီးခရီးနှင့်ကစားတဲ့စကားပြောနှင့်တွန်းလွတပ္ကွာ။ တချို့အကြောင်းပြချက်အဘို့၊အဘယ်သူသည်အကျွမ်းနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့မိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူရုရှားထံမှအတော်လေးခက်ခဲ။ ပြီးသူတို့ကျိန်းသေဖြုန်းချင်ပါဘူး။ အခါလည်းအတူ၎င်းတို့၏နံပါတ်များ၊ဒီကစားတဲ့စကားပြောကူညီလိမ့်မည်ဟုအလှဆင်၏အထီးကျန်။ ဒါကြောင့်မသည်သာနှင့်ဘာမျှမအဘို့သင်ရှိသည်ကြောင်းကိုသင်၏ကာလအတွင်း။ ငါဖို့သင်ဖိတ်ခေါ်အခြားစကားပြော။ သေချာအောင်၊ဒါကြောင့်ပေးဆောင်၊ဒါပေမယ့်မငို။ ချက်တင်ကစားတဲ့များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ချိန်းတွေ့ရုရှားပီ အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ။ ချစ်ကြည်ရေးအပေါ်ဘက်အခန်းသည်ဖျော်ဖြေအဆိုအရကစားတဲ့ဥပေဒ။ အများကြီးရှိပါတယ်သူတို့ကိုအမိန့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းဗီဒီယိုချက်တင်။ အဆက်မပြတ်လောင်သောအရာကိုအနေဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ စကားပြောနှင့်ကစားတဲ့စကားပြောနှင့်ကဗီဒီယိုချက်တင်အတွက်ရုရှားစကားပြောအသုံးပြုသူများနှင့်အတူသာ။ ၏သင်တန်း၊လူငယ်နှင့်အမျိုးသမီးထံမှရုရှားနှင့်၎င်း၏မြို့တော်မော်စကို၊ခရီးအတူတူ Chatroulette။ တချို့အကြောင်းပြချက်၊မြောက်ပိုင်းမြို့တော်ကိုယ်တိုင်က St။ ဘတ်၊တိကျသော။ ဒါပေမယ့်ထို့အပြင်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်ဝန်ဆောင်မှုတာဝန်ထမ်းဆောင်မှလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ အဓိကကျပန်းဘော်များမှာလူအများထံမှ:ရုရှား၊ယူကရိန်း၊မော်လ်ဒိုဗာ၊အာေမးနီးယား၊အဇာဘိုင္ဂ်န္၊ကာဇတ္စတန္၊ဥဇဘက်၊တာဂျစ်ကစ္စတန်၊လစ္သူေရးနီးယားလတ္ဗီးယား၊အက္စ္တိုးနီးယား၊အာေမးနီးယား၊အဇာဘိုင္ဂ်န္၊ေဂ်ာ္ဂ်ီယာနှင့်အရှေ့တောင်။ အခါသင်သို့သွားကြနှင့်အတူစကားပြောတစ်ဦးကျပန်းအဖော်၊သင်အပျော်အများကြီးကတော့။ ဒီရုံမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အဆက်အသွယ်နှင့်အတူလူ၊ဒါပေမယ့်အပြည့်အဝမင်နှင့်ချိန်းချက်အလက်များ၏နှင့်အတူနေသောသူတို့အလွန်ဝေးကွာ။ နှစ်သက်ဖွယ်နှလုံး-အ-နှလုံးပြောဆိုသို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်။ အမှန်တကယ်အတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အတူမင်းသ။ အဘယ်ကြောင့်မင်းသ။ ပြီးစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊အကြားရုရှားမိန်းကလေးများသင်ဖြည့်ဆည်းမည်မဟုတ်မရှိ။ သို့သော်ရုရှားအမျိုးသမီးဆက်ဆက်ရှိသည်ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာ။ အပေါ်အခြေခံခြင်းကျပန်းရှာဖွေတစ်ဦးဂြိုဟ်တု၊ကိုကျပန်းဂြိုဟ်တုပြိုင်မည်လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကို။ သင်လိုအပ်စတင်ပြီးနောက်စကားလက်ဆုံနှင့်အတူတစ်ဦးကိုကျပန်းအဖော်။ ငါလာမှအထက်ပါစာမျက်နှာကြောင့်၊သာအခမဲ့ကစားတဲ့စကားပြောခန်း။ လာမယ့်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးနေသည်ကိုလှည့်ဘက်၏အခန်းတစ်ခန်းနှင့်၎င်း၏။ ထိုအခါကိုယ့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ နှင့်ချစ်ကြည်ရေးသင်နှင့်အတူစတင်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတာနဲ့---တစ်သက်တာဖော်အတော်လေးသင်တို့အဘို့အသင့်လျော်။ ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ကသင့်ရဲ့မျက်နှာသာအတွက်:ရှိမရှိဒါကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ မိတ်ဆွေတစ်ဦးရွေးချယ်အခြေအနေ။ အွန်လိုင်းချက်တင်တစ်ခုအဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်သောအကြောင်းရင်းမဟုတ်အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ရပ်ကိုလာမည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရှိသည်လိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်ဆက်သွယ်ရေးမှတဆင့်ကင္မရာဘေးချက်တင်-ချစ်ကြည်ရေးဘေးနှင့်အတူအခန်း။ သစ်စိမ်းရဲ့ပုဂ္ဂလိကဗီဒီယိုကစားတဲ့ပေါင်းစပ် အကြမ်းဖျင်းတူညီသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလျှောက်ထား။ သူတို့လည်းအမှန်ဆိုင်းနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ခင်မင်သင်သို့ဖြစ်။ ထို့ကြောင့်သူသည်မရပ်မထီလေးစားပြုသောအမှုအရာ။ ထို့နောက်ချိတ်ဆက်မှဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်မှထုတ်ပြန်သတိပေးချက်များ၊စမ်းချောင်းဗီဒီယိုထဲကအခန်းရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြည့်ဖို့လူတိုင်းအတွက်။ ဆိုက်သည်အမည်မသိနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ။ သီးသန့်အကျွမ်းနှင့်အတူခင်မင်လှမိန်းကလေးများအသက် ၁၈ နှစ်နှင့်အဟောင်းတွေ။အလွန်မကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုရှိပါတယ်နေကြတယ်ငြီးငွေ့သင်္ဘောနှင့်အခြားယောက်ျားမဟုတ်ကြဘူးသောသူပြရန်သင့်လျော်သောအဘို့အရိုသေလေးစားသူတို့၏အမျိုးသမီး။
ချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များအတွက်နေထိုင်ယူကရိန်းနှင့်ရုရှား၏အပထမတန်းစားလမ်းတွေကိုသတ်ပစ်ဆည်းဘို့အလောဘကြီးဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူလှပသောမိန်းကလေး။ တချိန်တည်းမှာ၊ငါမှတ်မိဖို့အကြောင်းအထက္ကစားတဲ့စကားပြောမိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူ ၁၈ အသက်အနှစ်ကနေအရမ်းကွာခြားချက်တင်အတွက်ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူသင်ရှာဖွေမည်မဟုတ်ယောက်ျားဝှေ့၏ရှေ့တွင်ရေချိုးခန်းနှင့်အတူသင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွား။ ဗီဒီယိုကစားတဲ့စကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်သည်အလျင်အမြန်စိစစ်ပြီးပထမစက္ကန့်တားမြစ်ထိုကဲ့သို့သောနောက်လိုက်များ၏လူငယ်အမျိုးသမီးနှင့်လွှမ်းမိုး girt။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကစားတဲ့နှင့်အတူစကားပြောမိန်းကလေးငယ်များကမ်းလှမ်းချစ်ကြည်လက်မပါဘဲမွတ္ပံုဗ်၊မော်နှင့် St။ ဘတ်။ သွင်ရာထူးသာရလည်ပတ်ခွင့်ပြုချက်။ နောက်တဖန်အ၊သူလိုလားကြောင်းမှတ်မိ၊ဟုတ်ပါတယ်၊အမျိုးသမီးများ၏အသက်အရွယ်ရောက်ရှိ ၁၈။.
Dating i Yamal-Nenets, Der S. A.
မရှိဘဲကြော်ငြာ အဘို့အတွေ့ဆုံရန်အစည်းအဝေး ချက်တင်ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့ ဗီဒီယိုစကားပြောွ ဗီဒီယိုဆက်သွယ်ရေးမိတ်ဆက် ချိန်းတွေ့နှင့်အတူဖုန်းနံပါတ် ချက်တင်ကစားတဲ့အခမဲ့ ဗီဒီယိုကလေးတွေအတွက်ပျော်စရာ တိုက်ရိုက်လိင်ချိန်းတွေ့ ဗီဒီချိန်းတွေ့ဆိုက်အခမဲ့